Ekpere nke ga enyere gi aka imata obi uto Chineke n’ime gi | EKPERE NA OZI
A ekpere-enyere gị aka ịmata ọ theụ nke Chineke n'ime gị
Ọ kpọ m gaa saa mbara; ọ zọpụtara m n'ihi na ọ masịrị m - Abụ Ọma 18:19
Akpọrọ Jizọs dịka Emmanuel, nke pụtara na Chineke nọnyeere anyị. Ọ họọrọ ịnọnyere anyị n'ihi na ọ na-enwe obi ụtọ na anyị. Obu kwa onye ndumodu ayi di ebube - uzo ayi si enweta amamihe nke Chineke oge nile.Ọ bụ Okwu Chineke nke maara ihe, nke nyefere anyị n’ụdị mmadụ ogologo oge gara aga ma ugbu a ka anyị ji mmụọ nsọ ya esoro anyị.
You nwere obi ụtọ na onwe gị?
Chineke chọsiri ike ka anyị na Ya dịrị n’otu n’echiche na n’omume. Họrọ ịhụ onwe anyị n’anya Ya bụ omume gbanwere ndụ ma weghachite ọ joyụ. Ọ bụrụ na anyị nwee nsogbu inwe ọ joyụ n’ime onwe anyị, Mmụọ Nsọ nọnyeere anyị iji nyere anyị aka ịgbanwe echiche anyị. Nke a bụ ekpere dị mfe iji nyere anyị aka iru enyemaka ọ dị njikere inye:
Chukwu, achọrọ m enyemaka iji kwenye na obi dị gị ụtọ. Biko jupụta m na amamihe gị ma chebe m ka m ghara ịkatọ echiche banyere onwe m. Amaara m na m ji ịhụnanya, nke ọma mere gị. Ama m na ị ma ume ọ bụla m na-eku, m makwa na ịmara echiche m niile, agụụ obi m, ọchịchọ m na ọnwụnwa m. Onweghi ihe n’ime m furu gị, ihe niile ị ma banyere m, ma nke ọma ma nke ọjọọ, anaghị agbanwe ịhụnanya i nwere n’ebe m nọ. Ama m na mgbe ị na-ele m, ị hụrụ ihe dị ezigbo mma. Nyere m aka ịmata ihe ndị a, nyere m aka ibi ndụ na nchekwa na udo maka ọ joyụ ị nwere maka m. N'aha Jisos, amen.
Mgbanwe a dị mfe nwere ike iweta ọgwụgwọ n’ime obi na mmekọrịta anyị. Mgbe anyị dabere n’ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ, anyị ga-enweta obi ike iji tụlee ụdị Ọ na-atọ ndị ọzọ ụtọ. Dịka anyị n’etolite n’ịhụnanya anyị nwere n’ebe Ya nọ, anyị n’etokwu onwe anyị n’anya ma anyị nwekwara ike ịhụ ndị ọzọ n’anya karịa. Nke a bụ ndụ na-agbanwe ịhụnanya nke Chineke na-enye anyị niile!
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis: Ilekọta ndị gbara ọsọ ndụ na 'virus nke ikpe na-ezighị ezi, ime ihe ike na agha'
Next Post → Post ozo:Akụkọ mkpirikpi nke ụbọchị: betkwụ